Soosaarayaasha Xarunta Waxsoosaarka PCB | Shiinaha PCB Been Abuurista Xarunta Waxsoosaarka Warshad & Shirkado
Kani waa 4 lakab oo adag oo wareega wareega ah oo loogu talagalay qalabka korantada. PCB-da adag ee jilicsan ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa tikniyoolajiyadda caafimaadka, dareemayaasha, qalabka wax lagu duubo ama qalabka, qalabka elektaroonigga ayaa waligood ku soo ururiya sirdoon dheeri ah meelihii yaraa, iyo cufnaanta xirxiradu waxay kordheysaa heerarka mar labaad iyo mar kale.
6 lakabka adag PCB dabacsan
Kani waa 6 lakab oo adag oo wareega wareega ah oo loogu talagalay qalabka Optics. PCB-da adag ee jilicsan ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa tikniyoolajiyadda caafimaadka, dareemayaasha, qalabka wax lagu duubo ama qalabka, qalabka elektaroonigga ayaa waligood ku soo ururiya sirdoon dheeri ah meelihii yaraa, iyo cufnaanta xirxiradu waxay kordheysaa heerarka mar labaad iyo mar kale.
12 lakabka adag adag PCB Rogers & Waxyaabaha Dupont
Tani waa 12 lakab oo adag oo wareega wareega ah oo loogu talagalay wax soo saarka Aerospace. PCB-da adag ee jilicsan ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa tikniyoolajiyadda caafimaadka, dareemayaasha, qalabka wax lagu duubo ama qalabka, qalabka elektaroonigga ayaa waligood ku soo ururiya sirdoon dheeri ah meelihii yaraa, iyo cufnaanta xirxiradu waxay kordheysaa heerarka mar labaad iyo mar kale.